Kooxda Man United oo kalsooni ku qabta inay Chelsea ku garaaci doonto saxiixa Erling Haaland – Gool FM
(Manchester) 02 Agoosto 2021. Sida ay sheegayaan wararka laga helayo gudaha dalka Ingiriiska, Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa kalsooni buuxda ku qabta inay gacanta ku dhigi doonto oo ay ku guuleysan doonto tartanka loogu jiro saxiixa Weeraryahanka naadiga Borussia Dortmund ee Erling Haaland.
Man United waxa ay ku kalsoon tahay inay Kooxda Chelsea ku garaaci doonto xagaagan saxiixa Erling Haaland, iyadoo la ogyahay in Blues ay xagaagan si weyn u baadi goobayso saxiixa xiddigan reer Norway.
Kooxda ku dheesha garoonka Old Trafford ayaa qarka u fuushay inay la wareegto Haaland 18 bilood ka hor markii uu ka tagayey RB Salzburg oo uu ku biirayey Borussia Dortmund, markaasoo Man Utd ay ku heli kartay Weeraryahankan qiimo hooseeyey, laakiin markii loo bandhigay waqtigaasi waxa ay shaki geliyeen tayadiisa.
Waxaa la fahamsan yahay in Tababare Ole Gunnar Solskjaer ay ka go’nayd inay la soo saxiixdaan Haaland bishii Janaayo ee 2020, balse Ed Woodward ayaa ka soo horjeestay lacagihii uu dalbanayey wakiilka ciyaaryahankan, waxaana markaa ka faa’iideysatay Dortmund oo gacanta ku dhigtay.
Wargeyska The Sun ee ka soo baxa England ayaa daabacay in Ole oo todobaad ka hor heshiis saddex sanadood ah qalinka ugu duugay Man Utd uu isku dayayo inuu maamulka kooxda Manchester United ku qanciyo inay wal walba u sameeyaan sidii ay ugu keeni lahaayeen Erling Haaland.
Waxa uu Wargeysku warbixintiisa intaa ku daray in Ole Gunnar Solskjaer uu ku wargeliyey Man United inuu ku caawin doono xiriirka dhow ee uu la leeyahay da’yarkan Haaland oo uu tababare u soo noqday.
Erling Haaland ayaa la sheegayaa inuu xiiseynayo inuu ka ciyaaro Old Trafford inta uu joogo Macallin Solskjaer, laakiin ay xaaladdiisu isbeddeli doonto haddii uu ka tago tababaraha ay isku waddanka yihiin.
Waxa ay Manchester United ay xagaagan soo iibsatay Jadon Sancho iyo Raphael Varane, waxaana uu qorshaheedu yahay inay saxiixa Haaland kula dagaalanto xagaagan dambe kooxda Chelsea, maadaama ay ku kalsoon yihiin in saxiixa laacibkan uu ka caawin doono Solskjaer, maadaama weeraryahanku doonayo inuu markale la shaqeeyo Ole.